» परिसंघमा सरगर्मीः ७ जना उपाध्यक्ष चयन, वरिष्ठ को ?
परिसंघमा सरगर्मीः ७ जना उपाध्यक्ष चयन, वरिष्ठ को ?
२०७८ श्रावण १२, मंगलवार २०:३६
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको विधान अनुसार ७ जना उपाध्यक्ष चयन भएका छन् । परिसंघको गभर्निङ काउन्सिलले उनीहरूलाई उपाध्यक्ष चयन गरेको हो ।
परिसंघको १८ औँ साधारणसभापछि विष्णुकुमार अग्रवालले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
परिसंघका उपाध्यक्षमा सिजी इलेक्ट्रोनिक्सका, चितवन उद्योग संघका कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेश मेटल क्राफ्टका राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीका वीरेन्द्रराज पाण्डे, राज ब्रुअरीका राजबहादुर शाह, चन्द्रागिरि हिल्स हेमराज ढकाल र लक्की नेपालका रोहित गुप्ता चयन भएका छन् ।
मंगलबार परिसंघका अध्यक्ष एमिरेट्स विनोद चौधरीले उपाध्यक्षहरूको घोषणा गरेका हुन् । परिसंघको विधान अनुसार संस्थापक समूह, प्रतिष्ठानगत समूह र संस्थागत सूमहबाट उनीहरू उपाध्यक्ष भएका हुन् ।
परिसंघको विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरू मध्येबाट उपाध्यक्षहरू चयन भए । उनीहरूको सपथ ग्रहण मंगलबार नै सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष एमिरेट्स चौधरीले परिसंघलाई निजी क्षेत्रको अग्रणि संस्थाको रूपमा उभ्याउने गरी काम गर्न नवनिर्विचत पदाधिकारीहरूलाई शुभकामना दिए । उनले हरेक विषयमा गृहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै नीति निर्माणमा परिसंघले सकारात्मक हस्तक्षेप अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले परिसंघका गतिविधि मुलुकमा औद्योगिकरणका निम्ति केन्द्रित हुने बताए । औद्योगिकरण विना मुलुकको दीगो विकास असंभव रहेको भन्दै उनले त्यसमा परिसंघले अब्बल भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे ।
परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले परिसंघले जहिले पनि उद्योगीको सामूहिक हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको उल्लेख गरे । उनले नयाँ नेतृत्वले पनि त्यसैलाई आत्मसात गरी राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने बताए ।
यी ७ उपाध्यक्षमध्ये एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष परिसंघको अध्यक्ष स्वतः हुने गरेका छन् ।